(Daawo):Qareen P. Clemetsen: Waxaan gacan uga baahanahay aqoonyahanka soomaalida ah ee Norway. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub (Daawo):Qareen P. Clemetsen: Waxaan gacan uga baahanahay aqoonyahanka soomaalida ah ee Norway.
(Daawo):Qareen P. Clemetsen: Waxaan gacan uga baahanahay aqoonyahanka soomaalida ah ee Norway.
Petter Clemetsen waa qareen ka howlgala shirkada qareenada ee Clemetsen & Mohammad AS, waxaana shirkada qareenada ku xiran boqolaal qof oo soomaali ah, waxaana u shaqeeyo turjumaano soomaali ah.
Qareen Petter Clemetsen ayaa muuqaalkan fariin u dirayo aqoonyahanka soomaalida ah ee ku dhaqan Norway, aqoontana u leh maadooyinka muhiimka ah ee cilmiga bulshada, yaqaanana dhaqanka labada bulsho ee soomaalida iyo Norwiijiga. Hoos ka daawo muuqaalka:
Booqo webka shirkada qareenada Clemetsen & Mohammad AS: Clemo.no
Kala xiriir: 22 42 98 00 Ama booqo adresska: Storgata 10A, 0155 Oslo
Previous articleMadaxa UDI-da oo qirtay qaladaad hey´adda ka dhacay, balse diidan in dib loo fiiriyo.
Next articleNorway: 252 qof ayaa Corona laga helay labadii maalin ee ugu danbeysay.